Cyprus Amaholide - kungcono njalo omkhulu. Isimo sezulu imnene, ugu olunesihlabathi esimhlophe futhi amagagasi crystal - kumnandi isiqhingi, lapho u-Aphrodite iphuma Foam ulwandle.
Cyprus unemisebenzi amahhotela ukuze ivumelane zonke ukunambitheka esiGrekini futhi imikhakha Turkish. Lesi sihloko sinikeza ulwazi mayelana izimpendulo zezivakashi ovakashele Seagull Ihhotela Apts 3 - ihhotela elincane resort of Protaras engxenyeni Turkish kunokuthula kulesi siqhingi.
Ezikhathini zasendulo, Protaras khona Polis lasendulo ngesiGreki (owalondoloza amanxiwa elincane). Ngo-1974, le ngxenye Cyprus iye yabuswa abaseTurkey, e Protaras waqala ukuthuthukiswa esebenzayo ye umkhakha spa. Manje lapha sakha inqwaba ehhotela izakhiwo, zokudlela kanye nezikhungo ukuzijabulisa.
Ogwini best Cyprus asezindaweni Protaras, isibonelo, nezwe odumile Bay amakhiwane (komkhiwane), eduze esemgwaqweni Seagull Ihhotela Apts 3 *.
Protaras resort onedumela ukuthula nokuzola. Befuna ukuzijabulisa okuningi asebenzayo angaya, olubheke edolobhaneni elingumakhelwane ka Ayia Napa (6 km), lapho uya nezithameli kwentsha.
amaphuzu Regional kwezinhloso zenzuzo kufanele ukhulume medieval sesonto lobu-Orthodox elalinikezelwe Prophet Eliya (ekhulwini le-14) futhi eyakhelwe egqumeni ne ukubukwa emangalisa kolwandle.
Isimo sezulu nakwezifudumele e Protaras (kanye sonke isiqhingi) - ashisayo, ehlobo ezomile (25-40 degrees), entwasahlobo efudumele ekwindla (30 Celsius), akusiyo abandayo ebusika (15 ukushisa). Ukuze ejwayele izivakashi abandayo Russian lokhu kusho ukuthi ungakhululeka unyaka wonke - kunoma iyiphi ukushisa isizini.
Beaches yokwelula cishe okuqhubekayo strip anesihlabathi kukhona okungcono eKhupro. Azikho kwamagagasi aphakeme, esihlabathini kuhle futhi ihlanzekile, ngomusa ezitshekile yokungena olwandle, amanzi afudumele bese ecacile (ne shades enhle kakhulu okwesibhakabhaka Emerald oluhlaza) - ipharadesi ngemindeni nezingane.
Kusukela ehhotela "We-seagull» (Seagull Ihhotela Apts 3 *) ebhishi kamasipala 2 amaminithi nje uhambo. Lokhu bay ethule, lapho ungakwazi ukubhukuda kuphela, kodwa futhi diving kanye nezinye ezemidlalo amanzi.
Ayikho izixuku amabhishi, ungahlala ukuthola isihlalo esingenamuntu. Beach kakhulu kahle itholakala edolobhaneni Agia Napa (resort engumakhelwane). lolwandle Omkhulu e-Bay komkhiwane eduze ehhotela "We-seagull" (ungathatha ibhasi euro eyodwa nengxenye). Omunye enhle kakhulu - Konnos Bay, okuyilona elidingekayo ukuya phansi ithrekhi kakhulu (ngaphambi kungenzeka ukuhamba kusukela Seagull Ihhotela Apts, kodwa ingane ushintsho kuyoba nzima).
Eduze Cape yamaGreki Ubuye lolwandle nice emhumeni pirate lapho izivakashi bazijabulise, kokwenza jumping phezu kwewa.
A beach kuthandwa kakhulu Cove ka Pernera (200 meters kusukela "We-seagull"), ngokuvamile okubizwa ngokuthi egumbini ngobumfihlo, induduzo nokuthula.
Abavakashi abaye bahlala Seagull Ihhotela Apts 3 *, umbiko ukuthi zonke emabhishi sun bed nezambulela ukukhokha 5-7 Euro (kuncike ebhishi), futhi ezitolo zendawo, ungakwazi ukuthenga parasol for 10-11 euro.
Seagull Ihhotela Apts 3 * (Cyprus) - kuba ehhotela nge "ekhaya" efulethini, okungukuthi, nge Ikhishi egumbini ngalinye lapho ungakwazi ukudla akho hhayi ukuba ukhokhele ukudla.
On-site eyakhelwe kakhulu amachibi landscaped (omdala nezingane), ezungezwe amasundu inkundla yokudlala, kukhona eluhlaza engadini kahle igcinwe, ilanga ithala futhi yokupaka khulula.
Ihhotela has ikheshi (elula izivakashi nezingane futhi strollers), endaweni yokwamukela izivakashi nge ukufinyelela internet.
We-seagull Ihhotela Apts 3 * (Cyprus) inikeza ngamasevisi alandelayo kanye nemisebenzi:
Imishini for amanzi ezemidlalo.
Rental emabhayisikili, buggies nezimoto.
Dlulisela ku sezindiza (kwendibilishi).
Ilondolo kanye nezakhiwo zamahhovisi zokuhlanza owomile.
On isicelo, igumbi angazamukela uhlaka ingane (akukho engaphezu kweyodwa). Abazali musa ukukhokhela izindawo zokuhlala nengane eyodwa kuze kube iminyaka engu-2. We-seagull Ihhotela Apts 3 * (Protaras) It kungavunyelwe ukuba alethe izilwane.
Ihhotela "seagull" has 59 amakamelo, kuhlanganise studios (ekamelweni elilodwa elikhulu, kuhlangene ekhishini) nezindawo zokuhlala ezimbili lokulala (igumbi lokulala ikhishi-eziphilayo).
Amakamelo abanalo TV, kodwa kukhona umsakazo, yokugezela nge okugeza (insipho, imoto, gel eshaweni, toilet paper enikeziwe), kuvulandi, air conditioning ne endaweni ekhishini neqoqo izitsha kanye nemishini.
Inthanethi emakamelweni (kuphela endaweni yokwamukela izivakashi). Ukuze uthole imali eyengeziwe, ungathatha ephephile (10 euro ngeliviki), kodwa lincane kakhulu, kuphela kumadokhumenti ithebhulethi, isibonelo, ngeke ilingane.
Abavakashi abaye bahlala Seagull Ihhotela Apts 3 * (Protaras), uqaphele ukuthi izinambuzane ehhotela lapho, amakamelo kukhona ivulekile, kodwa ayikho indawo hang swimsuits elina amathawula - on emphemeni of akukho la ngezintambo noma iziphanyeko.
Air isimo zivame ukufakwa ngqo maqondana embhedeni, ngakho ezinye izivakashi ukuhambisa emibhedeni yabo (kanye cleaner nsuku zonke wazibeka emuva), kanti abanye baye ushintshe ikhanda nezinyawo elele kuya conditioner emoyeni.
Zonke balcony studio efulethini ebhekene emgwaqweni noma lapho kupakwa Protaras (cishe njalo ezingenalutho), nge imibono Izintaba nemithi.
Ifenisha is upholstered Umbala Izinketho, emanzini yangasese akhishwa isigwedlo ekhethekile.
Izivakashi eziningi bayajabula abahlala We-seagull Ihhotela Apts 3 *. Isithombe ngezansi kunikeza umbono walokho ejwayelekile Igumbi studio.
Seagull Ihhotela Apts 3 * ( "Tophotels") iyathandwa ngenxa umnotho yokuhlala kanye Ikhishi endlini ngayinye, lapho ifaka ekhatsi loku lokulandzelako:
Izidlo (izimbiza ezinkulu kanye nezincane, amapani, izinkomishi, izibuko kanye izinkomishi, ubisi nesigubhu, amapuleti Saucers, izimfoloko, nezinkezo nommese, colander).
Sokuval Ibhodlela kanye ibhodi ahlabayo.
Kettles (esikhulu itiye), into yokucocobalisa, ikhofi umenzi (ngaphandle izihlungi, kufanele uthenge ngokuhlukile) bese juicer mathupha.
isitofu futhi kuhhavini.
Ukucwila ngamanzi ashisayo nabandayo.
Amakhabethe, itafula nezihlalo.
Seziqa (evulekile, kodwa efrijini ibuthakathaka).
Ihhotela Seagull Ihhotela Apts 3 * 2 km ukusuka edolobheni resort of Protaras isikhungo futhi 60 km kusuka esikhumulweni sezindiza zamazwe ngamazwe Larnaca (ehhotela Shuttle kuthatha isigamu sehora, njengoba "seagull" imele ekupheleni Protaras).
Eduze Car Rental futhi sebhasi, lapho ungaya cishe kunoma iyiphi idolobha eKhupro.
"We-seagull" itholakala eduze emabhishi eziningana enhle eyehlelayo futhi kwehlise emanzini acwebile, ngakho ziningi izingane, futhi izivakashi nezingane kukhona njalo inkampani ethokoza.
Edolobheni ezihlukahlukene enkulu amathilomu, emathaveni izitolo, kanye ebabazekayo chibi (ukuvakasha), okuyinto uxhuma bonke emabhishi Protaras.
izivakashi eziningi ukubika nakho kwabo lapho ukuhlala Seagull Ihhotela Apts 3 * (Cyprus). Izibuyekezo ukufakazela idumela elihle ehhotela.
Amanothi roominess nenduduzo studio efulethini, umsebenzi ezinhle emoyeni isimo ukuthi kuphole cishe lonke igumbi.
Pool likhulu futhi ukhululekile, ihhotela kanye yamakhefi ku-site ezingamabhangqa nemigoqo.
Ikhishi ndawo kahle ifakwe into edingekayo ukupheka futhi zijabulisa.
Ukubuyekezwa naye ukhuluma amaphutha alandelayo:
dermantinovoe enamathela SOFAS nezihlalo;
indawo esingesihle air isimo;
Iphansi abandayo (tile camera);
umsindo (umculo okhalela phezulu sivela esitaladini phambi bar nesigaxa ehhotela ngasechibini).
Annoying umsindo inothi cishe zonke izivakashi ngokuhlala Seagull Ihhotela Apts 3 *. Izibuyekezo zigcwele imibiko mayelana umculo njalo Amabha amabili - ngaphandle emgwaqweni futhi ngaphakathi pool.
Zonke amakamelo ngezansi phansi 4th, izivakashi eziningi quthu yimuphi ebusuku (umculo odlala amahora angu-2) noma ngosuku (umsindo uqala ngo 11 am). amafasitela avaliwe futhi balcony kanye conditioning air awazange asize.
Ukuze asebekhulile kanye nemindeni nezingane benethuba ubuthongo evamile kubalulekile, ngakho kufanele uyinake kulesi sici lapho ekhetha ihhotela.
Ngakolunye uhlangothi, izivakashi abaningi bacabanga ukuthi umculo akuyona ngempela iphazamise - amafasitela avaliwe futhi egqoke headphones, belele endlini yabo. Ngaphezu kwalokho, kunabantu ulale ngasekupheleni.
Futhi, ungakhohlwa ukuthi umculo okhalela phezulu in imigoqo abutholakali ehhotela "We-seagull", kodwa amahhotela kakhulu zokungcebeleka eziningi ezithandwayo. Ngakho-ke, esikhundleni yokuhlala akusho ngaso sonke isikhathi ukuxazulula le nkinga.
Futhi ekugcineni, ukusondela ukuba ibha unikeza esinye inzuzo - isiginali ezinhle-Wi-Fi kanye nekhono kalula ukubuka ama-movie ku-intanethi egumbini lakho (nge-headphone) khokhela hhayi lalelisisa ezintweni ezenzeka ngaphandle.
Ihhotela abasebenzi Inxanxathela Protaras Seagull Ihhotela Apts 3 njalo unake futhi iphendule, kodwa akukho reception abasebenzi abakhuluma isiRashiya, nakuba zikhona nezincekukazi, bekhuluma isiRashiya, futhi ungahlala ucele usizo ekubhekaneni abalawuli.
I izindlu iyatholakala nsuku zonke wekulihlanta (ithiphu - 1 euro - ngokuvamile kwesokunxele etafuleni). ahlanzekile kakhulu echibini kanye lokudlala endaweni kahle sigcinwe.
Uma amaholide wafika 14.00 (lapho ikoloni iqala), zingagoduka imithwalo yabo egumbini imithwalo kanye beya ebhishi.
Ngesikhathi reception, ungacela yensimbi noma i-adaptha ukuze ukushaja ifoni - izisebenzi njalo uye phambili (kubalulekile ukuba ukhokhe idiphozithi, okuyinto ibuyisele phezu kokuhamba).
Ngo intengo ifakiwe kuphela ibhulakufesi yezwekazi - isethi efanayo imikhiqizo nsuku zonke:
itiye, ikhofi, ubisi, ujusi, (2 izinhlobo, ukugxilisa ingqondo buhlanjululwe);
yogurt ne jam (4 izinhlobo);
ubhontshisi, ubhontshisi, imajarini (ibhotela alikho);
amaqanda ngiyocasha, amazambane athosiwe, ayi;
amaqanda ngiyocasha (kanye ngesonto);
Ubhontshisi okusemathinini, iminqumo, utamatisi fresh kanye ukhukhamba;
isinkwa, okusanhlamvu (Muesli 4 zinhlobo);
ushizi namasoseji engabizi;
Kufanele kukhunjulwe ukuthi akukho ukubhaka, izithelo, ibhotela, ubisi iphalishi - ukuze abantu abaningi (ikakhulukazi izingane) ukungatholi ukuthatha ibhulakufesi nhlobo, upheke egumbini.
Eduze ehhotela zikhona izitolo eziningi imikhiqizo, kanye nezindawo zokucima ukoma nezindawo zokudlela lapho ungakwazi ukujabulela izitsha yaseKhupro emangalisayo (izingxenye zinkulu kakhulu, ngakho-ke ungakwazi ukuthatha amabili), kanye isobho izingane, ukudla kwasolwandle, njll
Ngokwesibonelo, kushisa inyama isidlo nge dish side futhi isaladi zemifino fresh abiza 6-10 euro (izikhungo ngomculo bukhoma - 11-14 euro). Ukuze amakhasimende njalo abeza okwesibili, ukunikeza 10% isaphulelo.
Ezindaweni zokudla ungakwazi ukujabulela dinner okumnandi 30-40 euro abantu ababili (ngotshwala).
Ngokombono, ezitolo ezizungezile kuyinto ububanzi elinganiselwe kakhulu imikhiqizo futhi amanani entengo aphezulu, ngakho udinga ukuya esitolo esikhulu - kukhona eshibhile.
Kuyathakazelisa ukuthi buyaphikiswa endaweni zonke eCyprus akuyona ikhofi omuhle kakhulu, ngisho e-cafe. Lipton itiye izikhwama abiza 4 euro. Kodwa pizza ingcono kakhulu eRussia.
Uhambo eshibhile ukuthatha emigwaqweni edolobheni ejensi, hhayi no-opharetha tour. Isikhathi usuku lonke, ne isivuno ibhulakufesi ezomile, kuya amabhasi kufanele ushiye at 6:30 am. I uhambo ezilandelayo:
"Elibizayo Grand Tour" (nge yokunambitha leminqumo, iwayini, liqueurs kanye neminye imikhiqizo sendawo).
"Sea Safari" (10 euro, izingane ezingaphansi kweminyaka engu-12 khulula, kusukela 10,30 kuya 13,30, ukugibela isikebhe ezingasogwini, ebhukuda ichibi).
"Ngo ezweni nasolwandle" (uhambo amabhishi, ebhukuda ichibi).
Labo ungafuni ukusheshe sivuke uthanda ukuhlala ezimele, kungcono ukuqasha imoto, ATV noma ikalishi ukugibela yedwa Paralimni, Famagusta futhi Agia Napa, vakashela show nemithombo, amanzi ipaki kanye nezinye ezikhangayo.
Ezinganeni eyakhelwe eziningi zokudlala kanye ezikhangayo (eduze emathaveni amahhotela). Ngezinye 20.00 disco yezingane iqala ehhotela "Umqhele kuyona".
Nasi uhlu lwezinto ukuthatha nabo, uya Cyprus ehhotela "We-seagull":
Rope nge clothespins (ukuze ome swimsuits elina amathawula emphemeni).
Veza iphalishi (izingane).
Shampoo futhi eshaweni gel (ngezinye izikhathi egumbini).
Slippers (phansi abandayo).
Earplugs noma ama-headphone (umsindo kusuka emugqeni).
Tea izikhwama kanye nekhofi.
isichazamazwi English (ungakwazi e-mail ocingweni lwakho).
Kalula ekhishini ummese (egumbini ngokuvamile buthuntu futhi ubudala).
USB flash drive ne-movie, amabhuku kanye imidlalo (ayikho i-inthanethi emakamelweni).
Ibhishi amathawula (ihhotela alinikezi).
ingubo Esilula (dermantinovy ukubeka kusofa futhi ujabulele uma uvakasha).
Futhi, izivakashi eziningi belulekwa kanje:
Thenga izimpahla ezinkulu ezinkulu "Metro" (besiya Paralimni) kanye Lind e Protaras (isigamu sehora ngezinyawo noma ngebhasi kanye euro nengxenye).
Wayala granola kusihlwa, uma uhlela bezobuka ekuseni.
Thenga ngaphansi kwesambulela ogwini esitolo (ezishibhile ukhokha nsuku zonke), bese uthengise kwezinye abahambi.
Ihhotela "seagull" - kuba kukho ngempela egculisayo nayehamba ngebhajethi abangafuni ukuba overpay ngokuba okunethezeka isihlobo kanye ahlanzekile agcwele izinhlanzi namahansi kusukela amathawula, kodwa ukhetha ukuhamba xaxa, ibuyela ehhotela kuphela ubuthongo noma ukugeza.
Ihhotela Sultan Beach Resort 4 * (Egypt, Hurghada): ukubuyekezwa, izincazelo, ukubuyekezwa
On onjalo bonke iholide amaphupho
Sochi Breeze Ihhotela iyakwamukela izivakashi
Ngakwesokudla lokuzalwa Alexei ngesizotha, kodwa kumnandi
Izimbangela ubudala namachashaza isikhumba
Indlela ukudlula thusi nendlela ukudlala ku-movie - izindlela eziphumelelayo, izincomo kanye nokubuyekeza
US Independence Day: umlando weholidi